URick noMorty bavuselelwe iziqephu ezintsha ezingama-70 | Izindaba zamagajethi
U-Eder Esteban | | Ama-movie nochungechunge, Izaziso
Omunye wabadali bakaRick noMorty muva nje uqalise ama-alamu. Njengoba esitatimendeni waveza ukuthi kungenzeka ukuthi isizini yesine ayisoze yakubona ukukhanya. Okuthile okwenze abalandeli bochungechunge oludumile bakhathazeke ngokuphela noma ukukhanselwa kwalo. Ngenhlanhla, lolu daba luphele kungekudala, ngoba sesivele siyazi ukuthi kuzokwenzekani kulolu chungechunge.
Njengoba kungaqinisekiswa ukuthi uRick noMorty bazobuya nesizini yesine. Yize kungekhona lokho kuphela, kepha kuzoba nezinye izahluko eziningi ezintsha ochungechungeni. Kusukela ukuvuselelwa kwayo kube yiziqephu ezintsha ezingama-70. Ngakho-ke kukhona uRick noMorty isikhashana.
Ukuvuselelwa okungukukhululeka okukhulu kubalandeli bochungechunge emhlabeni jikelele. Kusukela kula masonto kube nokungaqiniseki okuningi. Ngoba uMeyi imvamisa kuyinyanga lapho kumenyezelwa ukukhanselwa kwazo zonke izinhlobo zochungechunge, kungaba ku-inthanethi noma kuthelevishini. Ngakho-ke babengamasonto ayisihluthulelo.
Kepha i-Adult Swim, inethiwekhi yethelevishini esakaza uRick noMorty, ikuqinisekisile ukuvuselelwa kochungechunge. Ukuvuselelwa okuzoba iziqephu ezintsha ezingama-70. Kulindeleke ukuthi zisatshalaliswe phakathi nezinkathi eziningana, ngakho-ke bazohlala iminyaka eminingana. Ngakho-ke kuyaqinisekiswa ukuthi zizoba khona ezinye iziqephu ezibalelwa ku-100 zochungechunge.
Okwamanje akukakaqinisekiswa ukuthi uchungechunge luzoqhubeka kangaki kumasizini amaningi. Noma ukuthi lezi zahluko ezintsha zizosatshalaliswa kanjani yilabo abavuselele. Ngakho-ke kuzodingeka silinde ukuphawula okwengeziwe. Kuphakathi kokubhukuda kwabantu abadala noma kubadali bakaRick noMorty.
Kepha, kubo bonke abalandeli bomdlalo owuchungechunge, izindaba zimnandi, luselude ukhalo okusamele luhanjiswe ukuze uchungechunge luphele. Okwamanje usuku lokukhululwa okufanayo alwaziwa. Ngakho-ke sethemba ukuthi sizokwazi lolu lwazi kungekudala.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » URick noMorty bazobuya neziqephu ezintsha ezingama-70
IMars 2020 izothatha indiza enophephela emhlane nayo iye eplanethi engomakhelwane